Zambia oo qoratay askar Shiinees ah oo ku biiraya booliiska | Saxil News Network
Zambia oo qoratay askar Shiinees ah oo ku biiraya booliiska
Booliiska dalka Zambia ayaa qorey 8 ka mid ah dad u dhashay dalka Shiinaha, waxayna ka mid noqonayaan booliiska dalkaas.
Talaabadan ayaa dhalisay caro weyn oo dadka ka imanaysa kadib markii taliyeyaasha ciidanka ay horay askarta uga mamnuuceen in ay guursadaan lamaane ajaaniib ah.
Askartan cusub ee la qoray ayaa ka mid noqonaya ciidammada keydka, kuwaas oo shaqayn doona galin uun, waxaana shalay shaqo galiyay madaxa booliiska dalka Zambia.
Shacabka Zambia oo codkooda dhiibanaya
Madaxweynaha Zambia oo ku guulaystay doorasho
Zambia: Muran ka taagan “maalinta fasaxa caadada” haweenka
Dickson Jere oo ah garyaqaan u dhashay dalkaas ayaa sheegay in shaqo galintan muwaadhiniinta shisheeye ee ciidanka booliiska ay tahay mid sharci daro ah , si cadna uga hor imanaysa dastuurka Zambia oo mamnuucaya in qof heysta labo dhalasho uu ku biiro ciidammada amniga.
“Muwaadhiniintaada waxaad ka hor istaagaysaa in ay ku biiraan booliiska sababtuna tahay maadaamaa ay heystaan labo baasaboor, haddane dad shiinees ah oo aan wax xiriir ah la lahayn dhulkan ayaad u ogolaanaysaa in ay ku biiraan booliiska” ayuu yiri.
Afhayeenka booliiska Zambia Esther Mwata-Kotongo ayaa difaacday talaabada lagu shaqaalaysiiyay shisheeyaha, waxayna sheegtay in ay ku shaqaynayaan iyada oo ay kormeerayaan saraakiil kale.
“Waxaa ciidammada kaydka ka mid ah dad Hindi ah, dadkana waxbo kama qabaan taas, maxaa maxaa shiineeska laga rabaa oo aan u takooraynaa?, waxaan isticmaalaynaa xeerka booliiska oo aanan qofka lagu takooraynin jinsiyadda uu